CODKA Arbacada 2008-10-01 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Marita Ulvskog, Xoghayaha (S)
CODKA Arbacada 2008-10-01
Publicerat torsdag 2 oktober 2008 kl 10.30
Barnaamijka maanta wax yaabaha aad ku maqli doontaan:
Dhibaatada dhaqaalaha Adduunka oo laga walwal qabo ineey saameyn weyn gaarsiiso dalaka Yurub gaar ahaan dalkaan Iswiidhan. Kadib markii ganacsigii Bangiyadii aduunka intoodii badneed gaar ahaan kuwa maraykanka ay wiiqmeen. Dhinaca kalana shaqaale gaara haya 1400 oo ruux ay shaqadii ka ceeyrisey shirkadda Baabuurta ee VOLVO.
Xoghayhii gaar ka ahaa ee xisbiga Socialdemokraterna Marita Ulvskog oo iska casishay jagadii xogheenta Xisbiga.
Ciidul Fitriga, Dalkaan iswiidhan ayaa ka midda dalaka ay dadka muslimiintaah ay shalayto sida weyn ugu ciiday munaasabada ciidul Fitriga, iyadoo dadka oo faraxsan ay isugu soo baxeen goobihii lagu cibaadeysana haye. Waxeeyna Idaacadu goobjoog ka aheed magaalooyinka waaweyn sida Stockholm iyo Götenborg, sidii salaadda loogu tukadayna halkaan ayaad ku maqleeysaan.
Inkastoo reen reenta ciddan iyo gudashadda ramaddanka aysan kali u aheen Muslimiiinta, waxaa jirey shirkaddo ganacsi oo sheegay ineey ka faa’iideen bisha ramadaan iyo dabaaldaga Ciidaba. Halkaan ayaad ku maqleeysaan sideey hadalka u dhigeen shirkadleeydu.